Global Voices teny Malagasy » Toy Izao No Niseho Rehefa Nisy Nandevim-Belona Tao Ambanin’ny Tany Ny Alika Bevohoka Iray Tao Voronezh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Septambra 2015 6:42 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Pikantsary: Moye! Online / YouTube
Namonjy alika voafandrika tanaty toerana mampanonofy ratsy ny mponina tao amin'ny tranobe iray ao Voronezh. Tany am-piandohan'ity herinandro ity, toa nalevin'ireo mpanamboatra trano tao ambanin'ny tany ilay biby, raha nanavao ny vavahady lehibe ao amin'ny tranobe izy ireo. Nilaza ireo mpanofa trano fa nanomboka nandre feon'alika sempotra sy mitaraindraina ao ambadiky ny biriky vao avy nalahadahatra ry zareo tamin'ny Talata 22 Septambra.
Nandritra ny roa andro, tsy nahavita namaly ny fangataham-pamonjena ny manampahefana tao an-toerana. Noho izany, nanapa-kevitra handray andraikitra ireo mpanofa trano maromaro tamin'ny Alakamisy 24 Septambra, ka nanala ireo biriky sy nandavaka ny tany misy ilay biby voafandrika, izay hita fa bevohoka. Nivoaka tao amin'ny aterineto avy eo ny lahatsary misy ny fanavotana ilay biby, izay nahasarika mpijery maherin'ny 77.000 tao anatin'ny 48 ora.
Nampiantrano vonjimaika an'ilay alika ny vondrona ao an-toerana mpiaro ny zon'ny biby antsoina hoe “”Zo Hiaina “, nanatontosa hetsika  mba hitady trano vaovao ho azy. Mampalahelo fa namoy ny ainy ireo zanak'ilay alika (antsoina hoe Belka na “Squirrel”) noho ny rarin-tsaina sy ny tsy fahampian-drano tamin'izy voalevim-belona. Tsaboina ao amin'ny toeram-pitsaboana izy amin'izao fotoana izao, ka nanatontosa fitarafana (ekografia) taminy sy namositra azy ireo mpitsabo biby.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/30/75035/
 Zo Hiaina: https://vk.com/pravo_na_zhizn